ऐसेलुखर्कमा साँच्चै हेर्न लायक काम के–के भएका छन् पालिका प्रमुख ज्यू ? - Halesi Khabar
ऐसेलुखर्कमा साँच्चै हेर्न लायक काम के–के भएका छन् पालिका प्रमुख ज्यू ?
१७ कार्तिक २०७८, बुधबार १६:३७ ।
यसपाली दशैँ÷तिहारको अवसर पारेर ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा लामै समय बस्ने अवसर जु¥यो । आफ्नै गाउँपालिकामा गएपछि नाता, आफन्त, साथीभाइसँग भेटघाट र छलफलहरु हुने कुरा त रह्यो नै ।
विशेष गरेर एउटा पत्रकारले केही नवीनतम चासो राखेर हेर्ने र खोज्ने काम त भइ नै जान्छ । यसै मेसोमा ऐसेलुखर्क बजारतिर पुग्नै प¥यो भनेर गइयो । ऐसेलुखर्क बजार हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्र हो ।
गाउँपालिकाको कार्यालय यसै बजारमा छ । बजार वरीपरि अन्य पालिकास्तरीय कार्यालयहरु छन् । तर, दुःखको कुरा पालिकाको केन्द्र भएर पनि गएको पाँच वर्षभित्र यसको कुनै रङ बदलिएन । सडकको हालत उस्तै छ ।
पिउने पानीको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । पालिकाले गौरव गर्न लायक विकास निर्माणको काम केही देख्न पाइदैन । पालिकाका प्रमुख विश्व निरौलासँग एउटा महङ्गो स्कारपियो गाडी छ । उपप्रमुख पुष्पकला भुजेलले चढ्ने अर्को डबलक्याप गाडी छ । यसबाहेक बजारमा उही रुपका पसलहरु छन् ।
गाउँ–गाउँमा कच्ची सडकहरु खनिएका छन् । मोटरसाईकल बनाउने वर्कसपहरु थपिएका छन् । यसबाहेक त उही धुलो र हिलोबाहेक केही पनि भेटिएन । नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाईन टेलिफोनको टावर पालिकाले भवन बनाउँदा भत्काएर नजिकै प्रहरी चौकीमा थन्काएको वर्षौ भइसक्यो बनाउने कुनै छाँट छैन ।
झुलेडाँडामा बनाइएको नमस्ते मोबाइलको फोरजी टावर ठडिएको छ । तर, काम पुरा नहुँदा फोन लाग्दैन । यस्ता हरिबिजोकको पारमा रहेको पालिका हेर्दा कता–कता मनहरु कुँडिदो रहेछ । मेरो मन पनि यसैगरी कुँडिएको छ ।
बजारमा भेटघाट कुराकानी गर्ने क्रममा एकजना जनप्रतिनिधिले भनेका कुराले अझै मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो । पालिका प्रमुखकै पार्टीका जनप्रतिनिधिले दुःखेसो सुनाए । हाम्रो पालिका प्रमुख शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन् । उनलाई शिक्षाविद नैभन्दा पनि फरक पर्दैन । तर, पालिका प्रमुख भएर आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा नवीन काम केही गर्न सकेनन् ।
विकासको नाममा उही पुरानो शैलिभन्दा पृथक भएर अगाडि जान सकेनन् । पालिकाको गौरव कुनै योजनाहरु निर्माण भएनन् । उनले अझ अगाडि थपे, “साँच्चै भनुँ भने सर ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा गएको पाँच वर्षभित्र हेर्न लायकको कुनै काम नै भएन ।” उसो त ऐसेलुखर्क बजार पुरानो स्थापित बजार हो ।
पुरानो सरकारी अड्डाहरु भएको ठाउँ भएपनि यहाँ खास काम केही भएनन् भन्ने उनको गुनासो सही नै लाग्यो । बजारका बाटाहरुमा ढलान छैन । पालिका भवन बनाउने नाममा विवाद प¥यो । गुणस्तरहीन काम भएको सर्वत्र गुनासो आएपछि ल्याब टेष्ट नै गर्नु प¥यो । अहिले त्यो काम त्यसै रोकिएको छ ।
सभाहल बनाउने भनियो अहिले पिल्लरभन्दा अरु केही काम भएकै छैनन् । कोही आगन्तुक पाहुनाहरु पालिकाको केन्द्र आइपुगे हेर्न लायक तथा देखाउन लायक हामीसँग केही छैन । धार्मिक तथा पर्यटनका हिसाबले घुमाउन र देखाउन मिल्ने ठाउँहरु बनाउन सकिन्थ्यो तर, त्यतातर्फ पालिकाको ध्यान गएन ।
पुलपुलेसो र बाटोघाटोका कुराहरु केही राम्रै प्रगति भएका छन् । तर, केन्द्र भनिएको ऐसेलुखर्क बजारमै चाँही साँच्चै भएको केही छैन । यदि सोलुखुम्बको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकामा मोटरबाटो नखोलेको भए विकास त ठप्पै जस्तै हुने रहेछ भन्ने लाग्दछ ।
पालिका प्रमुखलाई प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको सहयोगपनि भरपुर रहेकै हो । के कारण यस्तो हुन पुग्यो । सोध्न मन लागेको कुरा यो छ । हुन त गाउँ कार्यपालिकामा नेपाली काँग्रेसको उपस्थिति कमजोर रहेको छ । प्रमुख लगायत दुईवटा वडामा मात्र काँग्रेसले विजयी भएको हो । तर, यसबाहेकका पाँचवटा वडामा प्रतिपक्ष दलका प्रतिनिधि रहेका छन् । स्वयम् उपप्रमुखसमेत फरक राजनीतिक पार्टीले विजयी भएकाले काममा समस्या आयो कि ? भन्न सकिन्छ । तर, पालिकामा प्रतिपक्षहरुले कुनै किसिमको अफ्ठ्यारो बनाएको भन्ने सुनिएको छैन ।
प्रतिपक्षमा बस्नेहरुको भूमिका सारथी कै जस्तो भए पनि काम किन हुन सकेनन् । यसमा प्रतिपक्षले उचित खबरदारी पो पु¥याएन कि ? रचनात्मक सुझाव र नवीन योजनाहरु निर्माण गर्ने कञ्जुस्याइ भएको पो हो कि ? प्रश्नहरु बग्रेल्ती भेटिएका छन् ।
निर्वाचनमा जितेर जाँदै गर्दा पालिका प्रमुखले बोलेका र देखाएका सपनाहरु कतै अधुरै त रहेन । यदि होइन भने पालिका प्रमुख ज्यूले साँच्चै हेर्न र देख्न लायकको काम के के गर्नु भएको छ ?
अब जनताले जान्न चाहेका छन् । बुझ्न चाहेका छन् । अब केही महिनापछि कार्यकाल सकिदै गर्दा गर्वकासाथ पाँच वर्षमा यो यो काम गरेँ अब बाँकी गर्न यो यो काम रह्यो भन्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।
नत्र अहिले जो जहाँ जहाँबाट निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यहि अनुहार अर्को पटक फेरि जनताको घरदैलोमा जानेबेला प्रश्नहरुको वर्षा हुनेछ । सामना गर्न नसक्ने अवस्थाहरु नआओस हार्दिक शुभकामना !